Paschim Nepal, Author at Paschimnepal.com - Page 524 of 573
Author: Paschim Nepal
पाँच पाँच वर्षमा चुनाव हुने गाउँ बारे जान्नुहोस्
नेपालमा स्थानीय निकायको चुनाव नभएको करिव १८ वर्ष भइसक्यो । २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको चुनावपछि अहिलेसम्म अर्को स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेको छैन । सरकारले चाँडै नै स्थानीय निकायको चुनाव गराउने बताउँदै आएको पनि धेरै भइसक्यो । तर नेपालकै एउटा गाविस जहाँ हरेक ५र५ वर्षमा गाविस चुनाव हुन्छ । र, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरु निर्वाचित हुन्छन् । उक्त गाविस हो हिमाली जिल्ला हुम्लाको
६ जना सम्मानीत
ठकुरी एकता समाज नेपाल केन्द्रीय कार्यसमति सुर्खेतले विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल ६ जनालाई सम्मान गरेको छ । आइतवार वीरेन्द्रनगरमा दसैं र तिहारको शुभकामना आदान प्रदान तथा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरी उनीहरुलाई सम्मान गरिएको हो । सम्मानीत हुनेहरुमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा.महेन्द्रकुमार मल्ल, साझा बिसौनी दैनिकका कार्यकारी सम्पादक विनोद शाही, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्वतन
ऋणकै छ त्रास के आउँथ्यो दशैँ ? झुपडीको बास के आउँथ्यो दशैँ ? हुनेखानेलाई पो आउँछ त चाडबाड, परियो दास के आउँथ्यो दशैँ ? दिनभरी नङ्ग्रा खियाउनु पर्छ , जुटाउन गास के आउँथ्यो दशैँ ? जुवा तासको नशा चढेपछी बालाई, हुन सक्छ बनबास के आउँथ्यो दशैँ ? यो अभावले गर्दा कहिल्यै लागेन, चाडबाड नि खास, के आउँथ्यो दशैँ ? रेमिट्यान्स कुरी बस्याथे छिमेकी, फर्कियो
यात्रुको भेषमा राजमार्गमा प्रहरी परिचालन
झण्डै दुई महिनादेखि खाली रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको प्रमुखमा मोहन आचार्य आएका छन् । तीन ठुला चाडपर्व नजिकीदै गर्दा नयाँ प्रहरी प्रमुख (एसपी) पाएको सुर्खेत प्रहरीले चाड पर्व लक्षित नयाँ योजनाहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ । गत विहीबारदेखि सुर्खेत प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी समालेका प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) आचार्यले दशैँ लगायतका चाडपर्वमा अपराधिक गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आईतब
संस्थानबाटै सहुलियतको चामल विक्री शुरु
नेपाल खाद्य संस्थानले चाडपर्र्वलाई लक्षित गरी सहुलियत मूल्यको चामल ल्याएको छ । संस्थानले उपभोक्ताको मागलाई मध्यनजर गरेर पहिलो पटक काठमाडौंपछि सुर्खेतमा सहुलियत मूल्य चामल ल्याएको हो । बाढीपहिरो, खडेरी जस्ता दैविकप्रकोपबाट आक्रान्त सुर्खेती जनताको माग आएपछि सहुलियत मूल्यका चामल विक्री शुरु गरिएको संस्थानले जनाएको छ । दशै, तिहार तथा छठ जस्ता महान चाडपर्व लक्षित सहुलियत दरको सुपथ मूल्य पसलबाट आम
ज्येष्ठ नागरिक दिवसको सार्थकता
मानिस बूढो हुन, अपराध होइन, एक दिन सवै बूढो अवश्य हुन्छ, यो धुव्र सत्य कुरा हो । हाम्रो देशमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति परिवार, समाज र राज्यको भूमिका कमजोर छ । देशमा वृद्ध÷वृद्धामैत्री कानुनको अभाव छ । उनीहरुले राज्यमा सम्मानजनक बाँच्न पाएका छैनन् । कुनै न कुनै किसिमबाट अपहेलना र तिरस्कृत हुनुपरेको छ । अझ भन्नुपर्दा नेपामा भखरैमात्र जारी भएको नेपालको नयाँ संविधान वि.स. २०७२ मा पनि जेष्ठ नागरिकको अधिक
प्रहरीका समाचार बहिस्कार गर्दै पत्रकार आन्दोलनमा उत्रिए
यही असोज ९ गते भएको पत्रकार माथिको दुव्र्यवहारलाइ लिएर कालिकोट पत्रकार महासंघले छानविन समिति गठन गरेको छ । कालिकोटका पत्रकारहरु माथि दिनानु दिन भईरहेका श्रृखलाबद्ध आक्रमणका घटनाका बारमा साझा धारणा बनाउन महासंघको बैठक शनिबार बसेको थियो । प्रकाशीत समाचार सामाग्रीका बिषयमा पत्रकार पवित्रकुमार शाही र रमेश रावल माथि भएको प्रहरी दुब्र्यहार र यस अघि श्रृखंलाबद्ध एकपछि अर्को पत्रकार माथि भएका घटनाहरु लगा
‘म्यादी सरकारले देशलाई गम्भीर सङ्कटमा लैजाने – नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराई
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा। बाबुराम भट्टराईले सत्ता र कुर्सी टिकाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन् । नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल जिल्ला परिषद् भक्तपुरले आज आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान एवं चियापान कार्यक्रममा उनले भारतसँग भएको २५ बुँदे सम्झौता देशको हितविपरीत रहेको बताए । संयोजक डा। भट्टराईले भारतसँग सम्झौता भएको दिन आफूलाई निद
घटस्थापनामा ५२ हाते लिङ्गो ठड्याइयो
कर्णालीकै प्रसिद्ध चन्दननाथ र भैरवनाथ मन्दिरमा नयाँ निङ्गा ठड्याइएको छ । मन्दिरमा लिङ्गा ठड्याइसकेपछि जुम्लीहरुले आफ्नो-आफ्नो घरमा घटस्थापना गरेका छन् । चन्दननाथ र भैरवनाथ मन्दिरमा ५२ हाते लिङ्गो र ५२ हाते कपडा (नेजा) राखिन्छ । परम्पुर्खा देखि नै चन्दननाथ र भैरवनाथ मन्दिरमा विजय स्तम्भ सहित ५ पुराना लिङ्गाहरु झिकेर नयाँ लिङ्गा खडा गरेको चन्दननाथ भैरवनाथ गुठी संस्थानका अध्यक्ष गौरिनन्द आचार्यले